CHERRY "BLACK WEYN": SHARAXAADDA IYO DABEECADA FASALKA - CHERRY
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee geedo midho leh waa in la muujiyo cherry. Waxa kaliya ee aan ka samaysan berry ee geedkan: compotes, cabitaanada miro, jamsi iyo jamsi waxay muddo dheer noqdaan naadeerka caadiga ah ee jikada ee hostess kasta. Intaa waxaa dheer, maraqa macaan iyo casiir badan ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo keega ama buuxinta caano, bur-burka iyo suxuunta kale. Si kastaba ha noqotee, haddii noocyo dhir ah oo dhir ah ay ku habboon yihiin ujeedadan, kuwa kale ma laha dhadhan soo jiidasho leh. Maqaalkani waxaan ka hadli doonnaa khudradda loo yaqaan "Black Black", taas oo lagu gartey sifooyin gaar ah, iyo sidoo kale qaraabada kale, waxay leedahay shuruudo u ah beeritaanka iyo daryeelka dambe.
Cherry "Black weyn": sharaxaad
Nasiib darro, xilliga kulaylaha xagaaga ee jiilaalka ayaa noqda mid aan caadi ahayn. Inta badan dadka degaanka xagaaga waxay diidaan inay iyaga u koraan si ay ugu roonaadaan hudheellada macaan ee macaan, taaso badanaa waxay ugu wacan tahay muuqaalkeeda iyo muuqaal kale oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in ka badan 150 noocyo cusub oo xiiso leh oo ah jeeriga ayaa u muuqday, kaas oo Black Large iska leh.
Dhammaan noocyada geedka waxaa loo kala qaybiyaa xilliga Biyaha: horraan ("Girl Chocolate"), Dhexdhexaad ("Kharitonovskaya", "Vladimirskaya"), dabayaaqadii-Bisaylkiisa ("Dhallinyaro", "Turgenevka").
Haddii aan ka hadleyno sida muuqaalka geedka geedkan, waa mid hooseeya (qiyaastii 3-4 mitir) waxayna ku taagan tahay tufaax qaro weyn oo taajajir ah oo ah qaabka gudniinka. Jilifka jirridda iyo xayawaanka waa mugdi madow (cagaaran caleemaha yar yar), xoogaa yar oo jajab ah oo ma burburin. On caleemaha dheer ee qaro weyn, internodes waaweyn ayaa si cad loo arki karo.
Cherry "Black weyn" wuxuu leeyahay buro waaweyn oo aan caadi ahayn oo aan ku habboonayn caleemaha, caleemaha waaweyn ee cagaarka ah waa cagaar madow oo midab leh oo leh ilko yar oo ku yaal geesaha.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha kala duwan ee madow ayaa la helay iyagoo dhex maraya noocyada hore dhexe ee jeeriga "Macaamilka madow" iyo "Zhukovskaya", halka A.Ya. Voronchikhina - tarbiyeynta xarunteeda Rossosh.
Qiyaaso badan oo qotodheer iyo ubaxyo geedo ah oo koraya ubaxyada 2-3aad. Waxay leeyihiin tufaax balaadhan oo cad, waxoogaa madoobaad ah dhamaadka ubax.
Kala duwan Tani waxaa kale oo lagu gartaa berry aad u ballaaran, ballaca kaas oo gaaro 5-7 garaam. Waxay leeyihiin hindis, casiir leh, jidhka casaan mugdiga ah, taas oo iyaga lagu qiimeeyo by bannaanka u. Waa inaan sheegaa in tani ay tahay mid ka mid ah noocyada ugu macaan, taas oo sidoo kale leedahay dhadhan macaan oo aad u fiican.
Waa muhiim! Dhagaxyada berry ah ayaa si fudud looga soocayaa saxarka, sidaas darteed uma baahnid inaad wasakh u hesho si aad u saarto.
Faa'iidooyinka iyo faa'iidada daruuriga ah ee "jeeriga"
Jordi "Black Darge" wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo kala duwan, inkastoo sharaxaadda ay tahay in aysan ku fashilmin inay sheegto faa'iido darrada. Ka hadlaya faa'iidooyinka kala duwan, waxaa habboon in la ogaado dhalidda sare iyo xawaaraha, taas oo ku saabsan 15-25 kg oo ah nooca berry ah laga goyn karaa hal geed yar (da'da 6-8 sano).
Waxaa intaa dheer, waa mid aad u baraf u adkaysta ikhtiyaarka ah in ay u adkeysan karaan heerkulka sida ugu hooseeya -32 ° -34 ° C iyadoon waxyeelleyn kelyaha. By habka, geedka waxaa si fiican u dulqaadan iyo mudada qalalan, taas oo aan saameyn ku tayada dalagga.
Faa'iidooyinka "Black Darge" waa in lagu sheegaa universality of destination, taas oo ah, nooca berry ah ayaa si siman ugu habboon lagu shaqeynayo (macaanka, jamciga, macaanka, jarjar), iyo isticmaalka cusub ama lagu keydiyo (waxay ku degan yihiin si qarsoodi ah loogu keydiyo qaboojiyaha illaa laba bilood).
Intaa waxaa dheer, noocyada kala duwan waxaa lagu gartaa bilawga ah ee fruiting, taas oo macnaheedu yahay in aad si deg deg ah (bilawga July) waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​berry waaweyn iyo casiir leh.
Laga soo bilaabo caqabadaha ee cherry Black, markaad sii kordhayso, waxaad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo "kulan" leh cudurrada fangas kala duwan, tan iyo cimilada qabow iyo qoyan dhirta ayaa badanaa ay saameeyeen moniliasis ama cocomycosis. Nolosha nololeed ee cherry waxay ku kooban tahay 15-17 sano, iyo dhalidu waxay hoos u dhacdaa da'da, taas oo aan waliba dhiirrigelin.
Akhri sidoo kale ku saabsan beerista cherry-ka, bessey, dheriga.
Sida loo abuuro cherry
Inkasta oo aan la qabin kala duwanaansho kala duwan, haddana waxaa jira shuruudo gaar ah ee beerto iyo daryeelkooda. Sidaa darteed, ka hor inta aadan sii wadin inaad beerto seedling dhalinyaro ah, hubi inaad tixgeliso talooyinka soo socda.
Sida loo doorto meel loogu beero geedka
Hardiness jiilaalka sare ee cherry ma aha macnaheedu in waxaa lagu beeray karaa meel kasta. Waa in aad xiiseyneysaa oo kaliya meelo si fiican u iftiimiya, diirran oo looga ilaaliyo dabaylaha woqooyiga. Sida geedka kale, noocyada kala duwan waxay jecel yihiin qorrax madow, inkasta oo ay si fiican u kori karto hadhka qayb ahaan.
Sidaa darteed, meelaha koonfurta ee goobtaada waa mid aad u fiican. Laguma talinayo in la gooyo geedo meelo u dhow biyaha dhulka ama meelaha hoose, halkaas oo guga inta badan waxaa dhacda in ay istaagto biyo kulul.
Shuruudaha Cherry Black ee ciidda
Marka la eego ka kooban ciidda, geedo Cherry Black Large Ha haysan shuruudo sareSi kastaba ha ahaatee, waxaa fiican in lagu beero ciidda cagaaran ama loamy ciidda, kaas oo la qodayo iyo xannibaadda horay (400 garaam oo lime ah ayaa lagu dabaqayaa halkii 1 m²). Toddobaadkii kaddib marka la qodo ciidda, Bacriminta dabiiciga ah waxaa laga dalbadaa (10-15 kg oo ah compost halkii 1 m²).
Waa muhiim! Waad sameeyn kari kartaa organic isla markaa lime. Ka dib markaad xaddideyso aagga waa inay ahaataa ugu yaraan hal wiig.
Sida loo abuuro geedka "Cherry Black" oo cherry ah
Waqtiga ugu wanaagsan ee beeritaanka jeeriga waa bartamihii Abriil, tan iyo xilligan xilligaas dhulka ayaa horay u kululeynaya, iyo burooyinkuna weli ma bilaabaan inay boodaan.. Dhexdhexaadiyaha godadka beerta waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la eegayo qiyaasta rhizome ee seeding oo inta badan waa qiyaastii 80 cm.Qoto dheer, sariirta beerto waa inay gaaraan 50-60 cm.
Marka qodidda godadka, lakabka sare ee bacriminta ayaa la saaraa, isku qasan leh humus (oo ah 1: 1 saamiga), kadibna 1kg oo ash ah, 20-25 garaam oo ah chloride potassium iyo 30-40 garaam oo superphosphate ayaa lagu daraa isku dar ah ciidda keentay.
Marka meesha la diyaariyo, waa in boodbood sare loo riixaa xarunta godka (waa inay ka soo baxaan 30-40 cm korka dusha sare ee dhismaha), oo ku shub isku dar walxaha ku wareegsan huurka (10-15 kg of topoil oo isku qasan leh 0.4 kg superphosphate iyo 0 , 5 kg of ash).
Dhalo yar ayaa lagu rakibay buurta buurtan, laakiin sida habka qoorta geedku yahay 6-7 cm korka dushiisa. Ka dib markaad toosiso xididdada dhirta si fiican, waa inaad si tartiib tartiib ah ugu darsataa ciidda, waxoogaa hoos u dhiga si hoos loogu dhigo meel aan bannaanayn.
Ka dib markii laga beerto agagaarka seedling fogaan ah 25-30 cm, ka samee daloolka adigoo rucubaha dhulka ku yaal dhinacyada. Baaldi biyo ah ayaa lagu shubay, isla markaa dareeraha si fiican ayaa loo nuugay, qoorta xididkuna wuxuu ku yaalaa dusha sare ee goobta, wareegga geedka ee geedka waxaa lagu dhajiyaa peat, humus ama balka iyo seedling ku xiran tahay godka.
Ma taqaanaa? "Black weyn" ma khuseeyaan noocyada is-bacriminta ee johnta, sidaa daraadeed, ma awoodo is-iskutallaabin. Taas oo la tixgelinayo, Turgenevka, Kentskaya, Zhukovskaya, Rossoshanskaya Chernaya iyo noocyo kale oo kale ayaa loo tixgeliyaa deriska wanaagsan ee geedaha sida.
Laguma sheegi karno, marka laga eego daryeelka, kala duwanaanta midabka Black waa mid aad uga duwan noocyo kale oo cherry ah, si kastaba ha ahaatee, dharka sare, waraabinta iyo manjo geedka waxay leeyihiin sifooyin gaar ah. Intaa waxaa dheer, fiiro gaar ah waa in la siiyaa arimaha la dagaallanka cudurrada fangasta kala duwan kuwaas oo kala duwanaantani u dhib badan tahay.
Ka waraabinta "madow waaweyn"
Tan iyo cherry waa "Black Large" - dhirta abaarta u adkeysata (tani waxaa lagu tilmaamaa sifooyinka), uma baahna waraabin badan. Marka ugu horeysa biyaha waxaa la soo geliyaa ciidda isla markiiba ka dib ubaxyada cherry (isla waqtigaas sida nuujinta), iyo labaad - oo leh kordhin ee size ee berry ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii xagaaga ay noqon doonto mid aad u kulul oo qallalan, markaa dheecaan dheecaan dheeri ah ma noqon doonto mid aad u sarreeya, taas oo macnaheedu yahay in ay tahay in la kordhiyo ilaa 2-3 jeer bishii. Hal hal waraabin ayaa ku qiyaastaa 2-3 baaldiyo oo biyo ah.
Ka dib markii uu roobabku, isku walaaqayo ciidda ama bacrinta carrada, waa lagama maarmaan in la daboolo qoto dheer oo ah 10-15 cm, iyo mulching joogta ah waxay gacan ka geysanaysaa in qoyaanka ka ilaaliso dhulka.
Waa muhiim! Xaaqidda ciidda agagaarka cherry waxaa la fuliyaa ugu yaraan saddex jeer xilli, laakiin si taxadar leh si aad u waxyeeleynin xididdada geedka.
Waxyaalaha gaarka ah ee nafaqada dhirta iyo daryeelka carrada
Bacriminta ciidda waxay bilaabmaysaa muuqaalka miraha ugu horreeya ee geedka. Bacriminta dabiiciga ah (humus ama compost) ayaa lagu daraa ciidda wax aan ka badnayn hal mar labadii sanaba hal mar, halka maadooyinka macdanta ah lagu dabaqo laba jeer sannadkii. Under qashin dayrta waa wanaagsan tahay in lagu daro potassium iyo fosfooraska dhulka, iyo in la sameeyo nitrogen guga. Shan sano oo shantii sano ah, dhulka waa ash mug leh ama burka dolomite.
Noocyada gooyaa ee jeeriga "Black Cream"
Taajka a cherry kasta waa in la sameeyaa, kaas oo bixiya manjooyin xilliyeed ee laamaha iyo caleemaha. Sida kala duwan ee kala duwan, waa guud ahaan uma dulqaadan karo dhumuc adagSidaa darteed, laamo kasta oo guga la caleemaha ka badan 40 cm waa in la gaabin.
Lafaatiirta koraya gudaha taajka waxaa lagu qaadi karaa si joogto ah. Geed weyn oo weyn, waa lagama maarmaan in la dhaafo wax ka badan 10 laamood oo iskudhaf ah, taas oo aan ka dhigi doonin oo keliya mid sax ah oo soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale waxay si weyn u yareyneysaa halista moniliya (iyadoo la raacayo habsocodka si sax ah loo fuliyo).
Marka la eego qaabaynta qaabaynta qaabaynta, si looga fogaado adkaynta culeyska, dhammaan laamiyada aan loo baahnayn waa la jaraa giraanta, isla markaa la gooyo laanta cusub ee xoogga leh.
Waa muhiim! Haddii aad aragto burburka koritaanka geed, waxaad isticmaali kartaa manjooyin nalalka dhalaalaya.
Geedka la gooyey ee sanadlaha ah waxaa badanaa lagu sameeyaa dhererkoodu yahay 60-80 cm, kaas oo kuu ogolaanaya inaad jiifiso 3-4 oo ah laamaha ugu sareeya ee heerarka koowaad iyo shtamb oo ah height 30-50 cm Sanadka soo socda, kormeeraha dhexe waa la gaabiyey 0.6-0.8 m ka ugu sareeya laanta koorsooyinka ugu horreeya. Heerka labaad wuxuu ka tagaa 2-3 laamood, si siman u dhigma agagaarka jirkiisa.
Cudurada waaweyn iyo cayayaanka ee jeeriga waaweyn oo jilicsan
Muuqaalka muuqaalka ah ee kala duwan ee la tilmaamay ayaa ah ujeedka cudurada fangas sida moniliosis iyo coccomycosis, kaas oo caleemaha geedka iyo mararka qaarkoodna berry ku xanuunsadaan.
Calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka cocomicoosis waxaa lagu muujiyaa samaynta dhibco yaryar oo yar yar ee caleen ka baxsan caleenka. Waqti ka dib, waxay kordhiyaan cabbirka, qaybta hoose ee caleemaha waxaa lagu daboolay ubax casaan ah. Caleemaha waxyeeloobay ayaa si deg-deg ah u engegay oo hoos u dhacay Caleemaha jirran ayaa qaab beddelaya oo madow.
Si aad uga ilaaliso cherry ka soo cocomycosis, waxaad isticmaali kartaa daroogooyinka soo socda: Skor, Topaz, Topsin-M, Abiga-Peak.
Si kastaba ha noqotee, xitaa calaamadaha caynkan oo kale ah, cocomycosis ma aha mid u xun geedka oo loo yaqaan 'moniliosis, kaas oo saameeya dhammaan qaybaha geedka: caleemaha, laamaha, caleemaha iyo berry. Xilliga hawada qoyan iyo qabowga, cudurku si dhakhso ah ayuu u kobcayaa, iyo fidinta caleemaha caleenta caleemaha (oo la mid ah gubashada) ayaa si dhaqso ah loogu bedelay dhaawacyada jirridda, caleemaha iyo beeraha.
Qaadida daaweynta waqtigeeda ayaa burburin doonta geedka, sidaas darteed calaamadaha ugu horreeya ee cudurku waa lagama maarmaan in laga saaro dhammaan qaybaha cudurka qaba, caleemaha dhicid, jarjar qaybaha waxyeellada ah ee jilif ka soo gooyay oo gubi.
In la dagaallamo moniliosis, ku buufin leh 3% oo ah dareeraha Bordeaux ayaa loo isticmaalaa, taas oo inta badan loo isticmaalo ujeedooyin ka hortag ah, laakiin qiyaasta 1%. Dagaalka ka soo horjeeda maadada 'moccomycosis', dhirta lagu buufiyo xeryaha oxide oxide waxay noqon doonaan qiyaasta ugu fiican.
Way fududahay in la helo suuqa hadda, laakiin markaad dooranayso waxay ka wanaagsan tahay inaad doorbidid daawooyinka nidaamsan, kuwaas oo leh saameyn togan ma aha oo keliya dusha sare ee xaashida, laakiin sidoo kale ka hortagga abuurista gudaha. Inkasta oo xaqiiqda ah in qiimaha ay waxoogaa ka sarreeyaan, haddana wax badan ayay ka faa'iideysan doonaan.
Waa muhiim! Iyadoo ku xiran cimilada hal xilli, dhowr daaweyn ayaa laga yaabaa in loo baahdo.
Ha ka baqin inaad dalbato kiimikada kiimikada marka ugu horeysa ee cuduradan, sababtoo ah berry saameeyaa maaha mid halis ka ah fangasidyada casriga ah.
Dub Large: Goynta
Sida horay u soo sheegnay, miro geedka oo dhan oo kala duwan ee "Black Cattle" waxay dhacdaa bilawga bisha Luulyo, dalagga ugu horreeya waxaa laga goyn karaa 3-4 sano ka dib marka la beerto. Haddii aad u hoggansameysid dhammaan shuruudaha daryeelka geedkan, markaa waa muddadan muddada mugdiga ah ee mugdiga, ballaaran iyo casiirku sugayaan adiga.
Sida xayawaanka, jiirta waxaa lagu talinayaa in la goosto 2-3 maalmood ka hor inta aaney qaan gaarin, taas oo ah, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u aragto in miraha geedku uu madow yahay, waxaad qaadi kartaa jaranjarada oo aad bilaabi kartaa inaad soo qaado. Waxaa ugufiican in la jarjariyo jeeriga leh burushyada u dhow meesha ay ku xiran tahay asliga ah ee miraha-geed.
Xaaladdan oo kale, dhammaan miraha caafimaadka leh waxaa lagu dhejiyaa baaldi ama weel kale, oo loogu talagalay 4-8 kg, iyo waxyeello ama berry fool xun ayaa lagu ururiyaa weel gaar ah. Haddii aad adigu geedka jimicsiga adigoon dhicin, waa inaad u isticmaashaa sida ugu dhakhsaha badan, maxaa yeelay waxay ku dhaafi doonaan juice-ka dhexdiisa mana sii jiri doonaan.
Geedka goynta waa in la sameeyaa subaxdii (sida ugu dhakhsaha badan ee dhoobada soo dego), dabcan, oo ku xiran cimilada qoyan iyo qabow.
Ixtiraamidda dhammaan shuruudaha agrotechnical, sanad walba waxaad heli doontaa alaab ceeriin ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee ilaalinta iyo dubista, sababtoo ah kala duwanaanta Cherry Black waxay ka jawaabtaa si fiican.